Ngaba umbutho wakho ukulungele ukusebenzisa idatha enkulu? | Martech Zone
Idatha enkulu ngumnqweno ongaphezulu kunenyani kwimibutho emininzi yentengiso. Imvumelwano ebanzi ngexabiso lesicwangciso seDatha eNkulu inika indlela kumyinge wamantongomane-kunye-iibholiti imiba yezobuchwephesha eyimfuneko kulwakhiwo lwendalo yedatha kunye nokuzisa ulwazi oluqokelelweyo oluqhutywa yedatha ebomini kunxibelelwano olwenzelwe wena.
Ungavavanya ukulungela kombutho ukusebenzisa i-Big Data ngokuhlalutya amandla ombutho kwiindawo ezisixhenxe eziphambili:
Umbono weQhinga Ukwamkelwa kweDatha eNkulu njengegalelo elibalulekileyo ekufezekiseni iinjongo zeshishini. Ukuqonda ukuzibophelela kweC-Suite kunye nokuthenga linyathelo lokuqala, lilandelwa kukwabiwa kwexesha, ukugxila, okuphambili, izixhobo kunye namandla. Kulula ukuthetha intetho. Khangela ukunqunyulwa rhoqo phakathi kwabaphathi abaphezulu abenza ukhetho olucwangcisiweyo kunye nenqanaba lokusebenza kwedatha yesayensi, abahlalutyi beenkcukacha kunye nabathengisi beedatha abenza umsebenzi. Rhoqo izigqibo zenziwa ngaphandle kokufakwa kwinqanaba elaneleyo lokusebenza. Rhoqo, umbono ovela phezulu kunye nembono evela embindini wahluke ngokupheleleyo.
Indawo yeDatha inokuba sisikhubekiso okanye isebenze. Iinkampani ezininzi zibanjiwe ziinkqubo zelifa kunye notyalo-mali olutshonileyo. Ayizizo zonke iinkampani ezinombono ocacileyo wexesha elizayo kwimephu yemibhobho ekhoyo. Rhoqo kukho ukungavisisani phakathi kwamagosa obuchwephesha bokubukeka kwe-IT kunye nabasebenzisi beshishini abonyukayo bebambe uhlahlo-lwabiwo mali olunxulumene noko. Kwiimeko ezininzi, umbono ophambili yingqokelela yeendawo zokusebenzela. Ukongeza kwisiphithiphithi ziinkampani ezingama-3500 + ezinikezela ngazo zonke iindlela zezisombululo zetekhnoloji ezenza amabango afanayo, zisebenzisa ulwimi olufanayo kunye nokunikezela ngeentengiselwano ezifanayo.
Ulawulo loLwazi ibhekisa kukuqonda imithombo yedatha, ukuba nesicwangciso sokungenisa, ukubekwa esiqhelweni, ukhuseleko kunye nokubekwa phambili. Oku kufuna indibaniselwano yamanyathelo okhuseleko agile, inkqubo yokuchaza ngokucacileyo kunye neendlela zokufikelela kunye nolawulo. Imithetho yolawulo ilungelelanisa ubumfihlo kunye nokuthotyelwa kokusetyenziswa okuguqukayo kunye nokusetyenziswa kwakhona kwedatha. Rhoqo le micimbi iyaxakaniseka okanye idityaniswe kunye ziimeko kunokuba ibonakalise imigaqo-nkqubo eyilwe kakuhle kunye neeprotocol.
Uhlalutyo olusebenzayo sisalathiso sendlela oqhube kakuhle ngayo umbutho kubahlalutyi izixhobo kwaye iyakwazi ukuzisa ubukrelekrele bokufunda kunye nokufunda ngomatshini. Imibuzo ebalulekileyo yile: ngaba umbutho unokwaneleyo? kubahlalutyi izixhobo kwaye zisasazwa njani? Ngaba kubahlalutyi Ukungena ngaphakathi kwintengiso kunye nokuhamba komsebenzi, okanye ucofe ixesha elithile? Ngaba kubahlalutyi ukuqhuba izigqibo eziphambili zeshishini kunye nokusebenza ngokukuko ekufumaneni, ekugcineni, ukunciphisa iindleko kunye nokunyaniseka?
Izixhobo zeTekhnoloji kuvavanya isoftware kunye nolwakhiwo lweedatha ezisetyenziselwa ukungenisa, ukuqhuba, ukucoca, ukukhusela kunye nokuhlaziya imilambo yedatha engena kwiinkampani ezininzi. Izikhombisi eziphambili linqanaba lokuzenzekelayo kunye nokukwazi ukumisela iiseti zedatha, ukusombulula uchazo lomntu ngamnye, ukwenza amacandelo anentsingiselo kunye nokuqhubeka nokuthatha idatha entsha yexesha lokwenyani. Ezinye izikhombisi ezilungileyo yimanyano nee-ESP, ukuthengisa ngokuzenzekelayo, kunye nabanikezeli ngeekhompyuter belifu.
Sebenzisa ukuPhuculwa kweMeko Amanyathelo amandla eefemu ekusebenziseni ngenene idatha abayiqokelelayo kwaye bayenze. Ngaba banokuchonga abathengi "abalungileyo"; Ngaba unokuxela kwangaphambili ukubonelelwa okulandelayo okanye ukondla abathembekileyo? Ngaba banazo iindlela zokwenza imveliso ukwenza imiyalezo ebhalwe igama lakho, ukwenza isahlulo esincinci, ukuphendula indlela yokuziphatha kwimithombo yeendaba eshukumayo okanye kwezentlalo okanye benze imikhankaso emininzi yomxholo ehanjiswe kwiindlela ezininzi?
Ukwamkela iMathematics Men sisalathiso senkcubeko yobambiswano; umlinganiso wenqweno yombutho yokujonga, ukwamkela kunye nokufumana iindlela ezintsha kunye neetekhnoloji ezintsha. Wonke umntu uphawula intetho yenguqu yedijithali kunye nedatha. Kodwa abaninzi bayoyika ii-WMDs (izixhobo zokuphazamiseka kwezibalo). Zimbalwa kakhulu iinkampani ezityala ixesha, izixhobo kunye nemali ukwenza idatha-centricity ibe sisiseko esisiseko seshishini. Ukufikelela kulungelelwaniso lweDatha eNkulu kunokuba lide, kubize kwaye kuyakhathaza. Ihlala ifuna utshintsho olukhulu kwisimo sengqondo, ukuhamba komsebenzi, kunye netekhnoloji. Esi salathisi silinganisela ukuzibophelela okuyinyani kombutho kwiinjongo zokusetyenziswa kwedatha kwixa elizayo.
Ukuqonda izibonelelo zeDatha eNkulu ngumsebenzi kulawulo lotshintsho. Ezi nqobo zisixhenxe zisenza ukuba sikwazi ukufumana umbono ocacileyo wokuba kwindawo yenguqu umbutho othile awela phi. Ukuqonda apho uchasene nalapho ufuna ukuba khona kunokuba luncedo xa usenza umthambo.
tags: uhlalutyo olusetyenzisiweyoidatha enkuluisiseko sedatha esikhuluItyala lokusetyenziswa kwedatha enkuluutshintsho ulawuloukudanisa ngohlaziyo lwedijithaliidatha yendalolawulo lwe dataizibalozezibaloumbono weqhingaiziseko zobugcisaicala lokusebenzisa
I-ClearVoice: IQonga lokuHamba kokuSebenza kokuCwangciswa, ukuqesha, ukuLawula, kunye noPapasho